Mon, Sep 23, 2019 at 11:15am
शुक्रबार, १७ जेष्ठ २०७६,	- तारा प्र. पौडेल.	1.99K
सन २०१४ मा गुजरातमा आफ्नो मुख्यमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल चलाइरहेका नरेन्द्र मोदीले जब राष्ट्रिय राजनितीमा हात अघि बढाए । सोही बर्ष चल्दै गरेको लोकसभा निर्वाचन जित्नु कंग्रेस आईको लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो ।
मुख्यमन्त्री रहँदा आफ्नो कार्यकालको दौरान नरेन्द्र मोदीले गुजरातको चिनारी नै परिवर्तन गरिदिएका थिए। फलस्वरुप आज गुजरात भारतको नम्बर वान बिकसित स्टेट भनेर चिनिन्छ।
मोदीको बढ्दो लोकप्रियता र उनको राष्ट्रिय राजनितीमा प्रवेसले कंग्रेस आई भित्र ठुलो आन्तरिक भुइँचालो नै ल्याइदिएको थियो । किनकी गान्धी परिवारलाई आफ्नो पार्टीको अवस्थाबारे राम्ररी थाह थियो।
मनमोहन सिंहको दशबर्षे कार्यकाल
मनमोहन सिंहको दशबर्षे कार्यकाल उल्येख्य प्रगतीलायक केही थिएन । पहिला पि.भी. नरसिंहा रावको समयमा करिब दश बर्ष अर्थमन्त्री छँदा राम्रो काम गरेर चर्चा कमाएका मनमोहन सिंह सन् 2004 देखि 2014 सम्म भारतको प्रधानमन्त्री त बने तर त्यतीबेला कांग्रेस आई को आफ्नै बहुमत थिएन ।
UPA(united progressive alliance) गठबन्धनको सरकार चलाएका मनमोहन सिंहको समयमा भष्ट्राचारका केही ठुला काण्डहरु मच्चिए, 2G टेलीकम घोटाला, कोइला घोटाला आदी।
त्यसैले सन् 2014 को चुनाव जीत्नु तत्कालिन सोनिया गान्धी अध्यक्ष रहेको कंग्रेस आई लाई त्यती सहज थिएन। आफै केही निर्णय गर्न नसक्ने, केही नबोल्ने आरोप लागेका मनमोहन सिंहलाई गान्धी परिवारको कठपुतली भएको आरोप लगाइयो जुन निर्वाचनमा सही सावित भयो।
उता आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुको बिरोधका बाबजुत तत्कालिन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंहले नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रत्यासी घोषणा गरी चुनावमा होमीने साहसिक निर्णय गरे।
आरोपका बापजुत तेस्रोपटक गुजरातको मुख्यमन्त्री
त्यो अवस्थामा कंग्रेस आईको लागी मोदीलाई टक्कर दिनु ठूलो चुनौती थियो। गुजरातमा मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा सन् 2002 मा मच्चिएको एउटा हिन्दु मुस्लिम दंगामा मोदीलाई आधारहिन आरोप लगाइएको थियो दंगा नाइके भन्दै तर पछी अदालतले मोदीलाई सफाई पनि दियो ।
त्यसका बापजुत तेस्रोपटक गुजरातको मुख्यमन्त्री बन्न सफल मोदी उपर हमला गर्न कंग्रेससँग खासै मुद्धा केही थिएन । त्यसैले बारबार गुजरात दंगाको दोषी बनाउन खोजीयो मोदीलाई तर त्यो उल्टै कंग्रेस आईको लागि आत्मघाती सावित भयो । फलस्वरुप आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत सहित नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए।
५४२ सिटको लोकसभामा कंग्रेस केवल ४४ सिटमा समेटियो। ८०% हिन्दु भएको देशमा कंग्रेस भाजपालाई कट्टर हिन्दुवादी आरोप लगाउँदै आफुलाई Secularism पार्टी भन्न रुचाउँछ ।
बंशवाद र परिवारवादको निकै आलोचना खेपेको कंग्रेस आईमा देशलाई हांक्न सक्ने नेतृत्वको खडेरी लागेको हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नरेन्द्र मोदीलाई भएको देखिन्छ।
मोदीको उदय हुनुपुर्व हिन्दुत्वलाई यसरी दबाइएको थियो कि ८०% हिन्दु भएको देशमा खुलेर हिन्दु हुँ भन्न पनि डर मान्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा जनताले बिकल्प खोजीरहेका थिए असल अनि कुशल नेतृत्वको जुन नरेन्द्र मोदीले निभाउन सके।
नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर आइसकेपछी भारतिय राजनितीको Narrative नै बदलिन पुग्यो।भारतभर मोदी लहर यसरी फैलीयो की २९ राज्य भएको भारतमा १९ राज्यमा BJP या BJP गठबन्धित NDA(National Democratic Alliance) ले सत्तामा कब्जा जमायो जुन कंग्रेस आई को लागी टाउको दुखाई थियो। सन् १९४७ को भारतिय स्वतन्त्रता पछी करिब ६ दशक देशको बागडोर सम्हालेको कंग्रेस निकै साघुरिंदै गयो ।
सन् २०१७ मा सोनिया गान्धीले पार्टीको नेतृत्व आफ्नै पुत्र तथा तत्कालिन पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गान्धीलाई सुम्पिइन । पुन परिवारवादको आरोप लाग्यो कुनै सार्बजनिक पद धारण नगरेका राहुल गान्धी पार्टी र देशलाई हाक्ने अभियानमा त होमीए तर आफ्नै अपरीपक्कताका कारण एक बैकल्पिक नेताको छवि बनाउन असफल रहे जहाँ मोदीले हर मोर्चामा आफुलाई परिपक्क र अब्बल सावित गर्दै गए।
सन् २०१९ को चुनावमा आइपुग्दा भारतको राजनैतिक परिभाषा नै बदलियो। सन् २०१४ अगाडी सेकुलरिज्मको नारा घन्काउने कंग्रेस मोदी लहरको अगाडी यति नतमस्तक हुनपर्यो की उसलाई पनि हिन्दुत्वको फेरो नसमाई सुखै भएन तर जनताले बिश्वास गर्ने अवस्था थिएन ।
राहुलले मैदानमा उतारे प्रियंका गान्धी भाड्रालाई
गुजरात जाँदा जनै लगाउने र केरला जाँदा जनै उतारी मुस्लिम टोपि लगाउने चरित्र भनि आरोप लगाइएका राहुल गान्धी राजनितीमा तटस्थ रहेकी आफ्नी बहिनी प्रियंका गान्धी भाड्रालाई पनि चुनावी मैदानमा उतारेर चुनाव जित्न हर-संभव कोशिस गरे ।
मोदीलाई राफेल लडाकु बिमान खरिद प्रकृयामा दोषी देखाउन खोजी आफु जनताको चौकिदार हुँ भन्ने छवि बनाएका मोदीलाई राफेल खरिद प्रकृयाको आधारहिन आरोप लगाएर चौकिदार चोरको नारा घन्काएपनि उनको स्वच्छ छविका कारण मोदीउपर लगाइको आरोप तथा गाली जनतालाई मन परेन।
आतंकवाद बिरुद्ध मोदी
आतंकवाद बिरुद्ध कडा रुख अपनाएका मोदी पाकिस्तानमा घुसी आतंकी अखडा ध्वस्त बनाइदिएको घटनाले जनताको प्रिय पात्र बन्न पुगे।
बिकास सम्बृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षा सहितको राष्ट्रवादको नयाँ नारा लिएर 2019 को चुनावमा होमीए, जुन मुद्धा जनताको दिलदिलमा बसिसकेको थियो।
भाजपालाई मुस्लीम बिरोधी पार्टी भनेर आरोप लगाइए पनि केही कट्टरवादी समुहले बाहेक "सबका साथ सबका बिकास" मोदीको नारालाई मन पराई मुस्लीमको ठुलो हिस्साले पनि भोट दिएको देखिन्छ।
२०१९ को चुनावमा लज्जास्पद हारको कारण
पाँच बर्ष प्रतिपक्षमा बसेको कंग्रेस आईले उठाउनु पर्ने मुद्धालाई दरकिनार गरी जनताले मन पराएका मोदीउपर तथानाम गालीको बौछार लगाउनु, भ्रष्टाचारको एउटापनि दाग नलागेको नेतालाई चोरको आरोप लगाउनु, राष्ट्रिय चासो र सुरक्षाका संवेदनशिल बिषयमा अनाबस्यक टिका टिप्पणी/राजनितीकरण गर्नु, जातीवादी/अतिवादी र पृथकतावादी समुहसँग गठबन्धन गर्नु, सेनालाई बिवादमा तान्न खोज्नु राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको कंग्रेस आई को भर्खर सम्पन्न २०१९ को चुनावमा पनि अर्को लज्जास्पद हारको कारण बन्यो।
मोदीकै शैली अपनाएर मन्दिरहरु त खुब धाए राहुल पृयंका तर शिक्षित भारतिय मतदातालाई त्यो भेंडाको खोलमा गाउँ पसेको स्याल जस्तै चरित्र हो भन्ने प्रष्टै थाह थियो ।
त्यसैको परिणाम स्वरुप २०१४ जस्तै यो निर्वाचनमा पनि कंग्रेस केवल ५२ सिट जीतेर एकल प्रतिपक्ष दलको नेता पनि बन्न नसक्ने अवस्थामा खुम्चियो । जहाँ मोदीको पार्टी भाजपा २०१४ मा पाएको २८२ सिट भन्दा २१ सिट बढी ल्याई एक्लैले ३०३ सिट सहित प्रचण्ड बहुमत ल्याउन सफल भयो।
कंग्रेस आई लाई अब पुन: सत्तामा फर्कनको लागि अहिलेदेखी नै पार्टीलाई सांगठनिक र बैचारिक रुपमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। २०२४ सम्म कंग्रेस ले आफुलाई यथेष्ठ रुपमा परिवर्तन गर्न सकेन भने मोदी लहरले गान्धी परिवारको अस्तित्व भारतिय राजनितीबाट मेटाइदिने प्रष्टै छ।
(लेखक हाल मस्कट ओमानमा हुनुहुन्छ)